Tourism Development and Land Use in... by Ethical Sector 2543 views
Tourism and Land: Relevant National... by Ethical Sector 1518 views
Developments in the National Land U... by Ethical Sector 1606 views
The ‘Roundtable: Tourism on Human R... by Ethical Sector 1590 views
Human Rights in the Tourism Sector ... by Ethical Sector 1930 views
Heritage Management, Planning and T... by Ethical Sector 2372 views
1. သီသီသိမ်း သုတေသီ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများဆီသို့ချဉ်းကပ်လမ်းစဉ်များ နေပြည်တော် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ - ၀၂ အောက်တိုဘာ မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Myanmar Tourism Sector-Wide Impact Assessment
2. အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများ • ယူကေနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန (DFID) • နော်ဝေအစိုးရ • ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရ • ဒိန်းမတအစိုးရ • နယ်သာလန်အစိုးရ • အိုင်ယာလန် www.myanmar-responsiblebusiness.org အမှတ် (၁၅) ရှမ်းရိပ်သာ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြန်မာ။ ဖုန်း၊ ဖက်(စ်) : ၀၁ ၅၁၀၀၆၉ ထူထောင်သူများ ပို၍တာဝန်ယူမှုရှိသော စီပွားရေးအလေ့အကျင့်များ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းများ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တာဝန်ယူမှုရှိသော အသိပညာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စကားဝိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ထိရောက်သော တရားဝင် အခင်းအကျဉ်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးရန်။
3. မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ
4.  မကြုံဘူးသေးသော တိုးတက်မှု၊ မြင့်တက်မှုများ ရှိနေခြင်း။  နိုင်ငံအတွက် အဓိကကျသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍဖြစ်ခြင်း။  အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ခြင်း။  မလိုလားအပ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်ခြင်း။  နောက်မကျသေးပါ။ အိမ်နီချင်းနိုင်ငံများ၏အတွေ့အကြုံများမှသင်ယူနိုင်။  တာဝန်ယူမှုရှိသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာစေရေး အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာရန်။
5.  The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“the Guiding Principles” or “UNGP”)  Safeguard policies of international financial institutions, IFC Performance Standards and Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines  The OECD Guidelines on Multinational Enterprises (which apply to companies domiciled in an OECD or MNE declaration adherent country and operating in Myanmar)  The UN Global Compact: based on the same core international standards as others, but does not provide as specific guidance so less reference is made to it.
6. လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံသည် လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင်၊့အမြင် ကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းများ၏ သက်ရောက်မှုများ၊ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ မူဘောင်များအားလေ့လာသည်။ မူဝါဒ၊ ဥပဒေများ၊ စီမံကိန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ပုံဖော်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်။ ဤကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆက်အစပ်၊ မူဘောင်များ၊ ဥပဒေ စာချုပ်များ (ရရှိနိုင်ပါက)၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများ။ ဤကဏ္ဍတွင်လူ့အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိရန်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မည်သည့်အကူအညီဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်သည်၊ မည်သည့်အဟန့်အတားများရှိသည်ကိုလေ့လာသည်။ EIA/SIA/ESIA စီမံကိန်းများထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ၊ လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေး ၊ ရပ်ရွာဒေသ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် အများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှဝေရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီမံက်ိန်းအဆင့် HRIA များသည် အများနှင့်မျှဝေလေ့မရှိ။ SWIA တွေ့ရှိချက်များသည် အများပိုင်ဖြစ်စေမည်။ အများပြည်သူအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေး အလေ့အထများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်စေလိုသည်။ အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့်လေ့လာသည် ကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများအား အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့်လေ့လာသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း၊ စုပေါင်းသက်ရောက်မှု၊ စီမံကိန်းအဆင့်များ။
7. ပထမအကြိမ် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု အောက်တိုဘာ - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ A. ရန်ကုန် B. ပုဂံ C. အင်းလေးကန် (ရှမ်းပြည်နယ်) ဒုတိယအကြိမ် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ - ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄ D. မော်လမြိုင် ၊ ကျိုက်ထီးရိုး E. ငွေဆောင် ၊ ချောင်းသာ F. မန္တလေး သီခြားလေ့လာခဲ့သောနေရာများ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ်တွင်း တံတားဦး ဟိုတယ်ဇုန် ချောင်းသာ ငပလီကမ်းခြေ
8. ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွင်  ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဋ္ဌာန  မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်  အစိုးရ မဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ဒေသခံ ရပ်ရွာအဆင့်  တစ်ဦးချင်း အင်တာဗျူး (၂၀၀) ဦး  အဖွဲ့ငယ်များနှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း (၁၀၀) ကြိမ် အခြားပါဝင်ပတ်သတ်သူများ  ဒေသခံများ  ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးသမားများ  အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ  သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများ  နိုင်ငံရေးပါတီများ  တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အာဏာပိုင်များ  ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ အစီရင်ခံစာတွင် နေရာ၊ ကုမ္ပဏီ၊ လူအမည်များအား အမည်နှင့်တကွ တိကျုစွာဖော်ပြရေးသားခြင်း မဟုတ်။
9. • စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း • ထိခိုက်မှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ • ဒေသရပ်ရွာလူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုများ • မြေယာ • အလုပ်အကိုင် • ကျား/မ ရေးရာ • ကလေးအခွင့်အရေး • ယဉ်ကျေးမှု • ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေး • သဘာဝပတ်ဝန်◌းကျင် ◌န◌ှင့်ေ◌ဂဟစနစ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
10. မြေယာ - ဟိုတယ်ဇုန်များ Source: The Myanmar Times
11. the ဟိုတယ်ဇုန်များ နှင့် ပတ်သက် တွေ့ရှိချက်များ ဟိုတယ်ဇုန်နေရာများ ရန်ကုန် ရွှေတြိဂံ နေပြည်တော် ကချင် မန္တလေး ရခိုင် ပုဂံ ကယား ချောင်းသာ ရှမ်း (မြောက်) ငွေဆောင် ရှမ်း (တောင်) မော်လမြိုင် ကရင် ပဲခူး ချင်း စစ်ကိုင်း ပြင်ဦးလွင် မကွေး တနင်္သာရီ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၊ MTF ဥက္ကဌ မှပြောကြားချက်အရ မီဒီယာမှဖော်ပြသောအခြားဟိုတယ်ဇုန်များ ကျိုက်ထီးရိုး မြိတ်ကျွန်းစု
12. the ဟိုတယ်ဇုန်များ နှင့် ပတ်သက် တွေ့ရှိချက်များ • ပွင်းလင်းမြင်သာမှုအားနည်းခြင်း။ • ဟိုတယ်ဇုန်များတည်ဆောက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဥပမာ - ဒေသခံများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။ • ဟိုတယ်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများသည်အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှုအားပိုမိုအားပြုခြင်း။ • ဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှု (Zonal planning’approach) လိုအပ်ခြင်း. - ဥပမာ - အင်းလေးကန် ဟိုတယ်ဇုန်။
13. the ဟိုတယ်ဇုန်များ နှင့် ပတ်သက် တွေ့ရှိချက်များ • ဒေသခံများအနေဖြင့် ဒေသတွင်းရှိခရီးသွားဒေသများ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပါဝင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးနည်းပါးခြင်း။ • ဒေသခံများအား ခရီးသွားဒေသများနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင်ပါဝင်ခွင့် နည်းပါးခြင်း။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ပဋိပက္ခလွန်ဒေသများ။ • ပဋိပက္ခနှင့်ဒေသတွင်းအခြေအနေ၊ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိ နည်းလည် ရန်။ • ဒေသခံများအနေဖြင့် ခရီးသွားဒေသ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအား ခံစားခွင့်ရှိရန် လိုအပ်ခြင်း။ • သဘာဝရှခင်းအလှအား ပျက်ဆီးစေခြင်း။
14. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဂေဟစနစ် Source : MCRB
15. the သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဂေဟစနစ် နှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ပတ်သက် တွေ့ရှိချက်များ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုဘဝဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများရှိနေသည်။ • စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုမရှိခြင်း - ကျိုက်ထီးရိုး၊ ဦးပိန်တံတား နှင့် တောင်သမန်အင်း။ • အင်းလေးဒေသ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်းထိန်းသိမ်းမှုစနစ်မရှိခြင်းကြောင့် ရွံ့နွံများ ပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အင်းရေခြောက်ခမ်းလာခြင်း၊ ရေ၏အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းလာခြင်း၊ မြေလွှာတိုက်စားခြင်းများ။ • သဘာဝအလှတရားများ ပျက်ဆီးခြင်း (အင်းလေးကန်)။
16. the သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဂေဟစနစ် နှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ပတ်သက် တွေ့ရှိချက်များ • ပင်လယ်ကမ်းခြေမှသဲများအားအမြောက်အမြားတူယူခြင်း - ငပလီ ကမ်းခြေတွင်ဟိုတယ်နှင့်အခြားအဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ရန်။ • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် Master Plan ပါအကြောင်းအရာ ခုနှစ်အနက် အခြားသော ကဏ္ဍများနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသော အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ • စီမံကိန်းများတွင် EIA (သို့) IEE များဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း။ • ပြည်တွင်းခရီးသွား၊ဘုရားဖူးသူများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အဆက်…
17. the Photo Source: MCRB ကလေးအခွင့်အရေး
18. the ကလေးသူငယ်များနှင့် ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များ • အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှရရှိသော သင်းခန်းစာများကိုလေ့လာ၍ဆင်ခြင်နိုင်သည်။ - မိဘမဲ့ကျောင်းများသို့အဓိကထားသွားရောက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း။ - လုပ်အားပေး (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) ရန်အတွက်လာရောက်သောခရီးသွားလုပ်ငန်း။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအား နားလည်သဘောပေါက်စေရန် အသိပညာပေးခြင်းလို။ • ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအားကလေးသူငယ်များအား ကျောင်းပညာသင်ကြားခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း ကိုအားပေးအားမြှောက်သည့် အပြုအမူများအား မပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းရန် အရေးကြီးပုံ။ • စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အခြားနိုင်ငံများ၊ ဒေသများ၏ အမှားများကို မိမိတို့ရှောင်ရှားနိုင်ရန်။ • လက်ရှိမူဘောင်များ - ဥပမား - The Code.
19. Photo source: Google image ကျား/မ ရေးရာ
20.  အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုပိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ခလစာ မရရှိခြင်း။  အချို့သောကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့အိမ်ထောင်ပြုလျှင် အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ပါမည်ဟု ကြိုတင်သဘောတူကြရခြင်း။  ဟိုတယ်အများစုတွင် မီးဖွားခွင့် (၃) လ ခွင့်ရက်ရှည်ပေးခြင်။  အမျိုးသမီးဧည့်လမ်းညွှန်များသည် ဘေးအန္တရယ်အလားအလာများရှိခြင်း။  တစ်ခါတစ်ရံ၌ အမျိုးသမီးဧည့်လမ်းညွှန်များအား လိင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်တောင်းဆိုခံကြရခြင်း။
21.  ခရီးသွားဧည့်သည်များမှ လိင်လုပ်သားများ ရှာပေးရန် ဧည့်လမ်းညွှန်များအား တောင်းဆိုမှုများရှိကြောင်း ဧည့်လမ်းညွှန်များမှ ပြောကြားသည်။  အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှေင့်အယှက်ပေးမှုများမှ ကာကွယ်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများမထားရှိခြင်း။  ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများပြားသောမြို့ပြများတွင် လိင်အပျော်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုများပြားလာမည်ဟု ထင်မြင်ကြသော်လည်း သုတေသနအဖွဲ့မှ အချက် အလက်များ ကောက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါ။
22. Photo source: Google image ယဉ်ကျေးမှု
23. • မသင့်လျော်သော၊ လေးစားမှုမရှိသော အပြုအမူများကို ယဉ်ကျေးမှုဒေသ၊ နေရာများ၌ ခရီးသွားများ ပြုလုပ်သည်များကိုတွေ့ရခြင်း။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းဒေသအချို့တွင် ခိုးမှုများ၊ လောင်းကစားမှုများနှင့် အရက်သေစာသောက်သုံးမှုများ ပေါများလာခြင်း။ • ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုင်ရာဒေသများ၊ နေရာများ၌ ဟိုတယ်များ တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်စေခြင်း။ • အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းပါးခြင်း။
24. • ရပ်ရွာဒေသများအား တွေ့မြင်နိုင်သော၊ မတွေ့မြင်နိုင်သော ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိခြင်း။ • ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့(UNESCO) မှမတွေ့မြင်နိုင်သော၊ ကိုင်တွယ်၍မရသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအား မပျက်မယွင်းအောင်ထားရှိခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုပြုခြင်း။ • ရန်ကုန်မြို့ရှိအချို့သောခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာနှင့်ဆိုင်သော သင်တန်းများ ပေးခြင်း။ • မြန်မာပြည်သို့လာရောက်လည်ပတ်သော နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် “Do’s and Don’ts” စာအုပ်ငယ်အား ထုတ်ဝေခြင်း။ အဆက်
25. Photo source: Google image တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ နေထိုင်သောဒေသများတွင် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
26. • ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း နှင့် နိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ တိုးတက်ရေးသည် ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်တွင် အပြုသဘော၊ အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်သည်။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးမှု အလားအလာရှိသော ပဋိပက္ခလွန် တိုင်းရင်းသားဒေသများ (ဥပမာ - ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်)။ • ခရီးသွားများ၏ လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း နှင့်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးစေခြင်း။ • လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် ပစ်ခတ်မှု ရပ်ဆဲရေး နှင့် နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးမှုများ မပြီးဆုံးမီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအား စိုးရိမ်မှုများရှိ်ခြင်း။
27. • ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားအကြောင်းပြ၍ စစ်အင်အားဆက်လက်ချထားခြင်း။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် စစ်တပ်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ပို၍ အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်း နှင့် အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ နှင့် အနှစ်သာရရှိသောဆွေးနွေးမှုများမရှိခြင်း။ • ဒေသခံများအနေဖြင့် ခရီးသွားဒေသ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအား ခံစားခွင့်ရှိရန် လိုအပ်ခြင်း။ (အဆက်)
28. (အဆက်) • ဒေသခံများအား ခရီးသွားဒေသများနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင်ပါဝင်ခွင့် နည်းပါးခြင်း။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ပဋိပက္ခလွန်ဒေသများ။ • ပဋိပက္ခနှင့်ဒေသတွင်းအခြေအနေ၊ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိ နည်းလည် ရန်။ • အချို့သောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနေထိုင်ရာဒေသများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း သည်၎င်းတို့အားအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်းဟုထင်မြင်သတ်မှတ်ကြခြင်း။
29. the Photo Source: MCRB
30. the Photo Source: MCRB
31. the Photo Source: MCRB
33. ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်…. - အခြားသောပက်သက်ဆက်နွယ်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်။ - ယခုကဲ့သို့ Tourism & Human Rights Roundtable ဆွေးနွေးပွဲများ လိုအပ်ချက် အပေါ်မူတည်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။ - ရန်ကုန်၊နေပြည်တော်တွင်သာမက ပြည်နယ်၊တိုင်းအဆင့်တွင့် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်။ - အခြားသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း လုပ်ဆောင်နေသူများအား ချိတ်ဆက် ပေးရန်။ အစရှိသည်…
Tourism Development and Land Use in Myanmar - Dr. Andrea Valentin
Tourism and Land: Relevant National Policy Frameworks - Vicky Bowman
Developments in the National Land Use Policy, and implications for tourism de...
The ‘Roundtable: Tourism on Human Rights’ (Europe) – how it began via Skype -...
Human Rights in the Tourism Sector - Dr. Nicole Häusler
PeaceNexus Foundation - Sophia Naing
Heritage Management, Planning and Tourism: Experiences from Sukhothai (Thaila...
SRI KSETRA and PYU ANCIENT CITIES: Myanmar’s First World Heritage Sites - U W...
Hotel Zones in Myanmar: An Update - Wai Phyo Myint, Regional Outreach Manager...